Maxaa Looga Hadlay Kulanka Uu Maanta Rooble La Qaatay Wakiilada Beesha...
Muqdisho (Wararka Maanta) – Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulamo gooni-gooni ah la yeeshey qaar kamid ah Wakiilada Beesha Caalamka, xili lagu gudo jiro u diyaar garowga doorashooyinka dalka.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga iyo Ergayga gaarka ah ee Norway Heidi Elburgi Johansen, oo ay ka wada-hadleen arrimaha doorashooyinka dalka.
Rooble ayaa uga warbixiyey Nicolas iyo Heidi halka ay marayaan dadaalada doorashooyinka dalka, oo qaarkood la filayo inay qabsooman dhamaadka bisha aan ku jirno ee July.
Wararka Maanta : Guddoomiyaha degmada Shangaani oo gurigiisa lagu go’doomiyay xilli saq...
Safiirada ayaa ayaguna dhankooda uga mahad-celiyay Ra’iisal wasaaraha dadaalkiisa ku aadan sidii dalka uga qabsoomi laheyd doorasho wada-ogol, oo uu asaga hormuud u yahay.
Kulanka Rooble ee Safiirada Midowga Yurub iyo Norway ayaa waxa uu qeyb ka yahay qorshaha ay xukuumadiisa si dhow ugala socod-siineyso Beesha Caalamka arrimaha doorashooyinka, maadama ay yihiin dhinacyada u badan ee bixinaya qarashaadka doorashooyinka.
Ciidamada maamulka Soomaalida oo si rasmi ah ugu biiray dagaalka Tigra…
Wararka Maanta : Midowga Afrika oo ka hadlay rabshadaha ka socda Koonfur Afrika - Radio...
Wararka Maanta : Faahfaahino kasoo baxaya dagaal khasaare geystay oo Muqdisho ka dhacay
Wararka Maanta : PUNTLAND oo ka hortimid kulankii dhexmaray Kheyre iyo Maxamed Cirro + ...
Wararka Maanta : Habraaca doorashada Aqalka Sare oo lasoo saaray (Aqriso) - Caasimada O...
Wararka Somali7 mins ago
Wararka Somali29 mins ago
DF iyo maamulka G/Banaadir oo soo saaray amarro ku socda shacabka Muqd…